Mushure memakore anopfuura gumi ekuenderera mberi mukuvandudza uye hunyanzvi, GreenPlains yave China inotungamira uye inozivikanwa pasi rese yekudiridza chigadzirwa vagadziri. Mumunda wezvigadzirwa zvemadiridziro, GreenPlains yakagadzira yayo inotungamira tekinoroji uye zvigadzirwa zvakanaka. Kunyanya mumunda wePV vharuvhu, Sefa, Drippers, uye Mini maVheji uye Fittings, GreenPlains yave China yeimwe yemhando dzinotungamira.
GreenPlains inosarudzika muR & D, kugadzirwa, uye kushambadzira kwezvinhu zvekudiridza. Iyo yekugadzira musangano ine zvinopfuura mazana mana kuumbwa. Zvigadzirwa zvinosanganisira PVC Bhora Mavharuvhu, PVC Butterfly Mavharuvhu, PVC Ongorora Mavharuvhu, tsoka mavharuvhu, Hydraulic Control mavharuvhu, Mhepo Valve, Filter, Drippers, Sprinklers, donhwe tepi, uye Mini mavharuvhu, Fittings, Clamp Chigaro, Fertilizer Injectors Venturi, PVC LayFlat Hose uye Fittings, Zvishandiso uye zvimwe zvakawanda zvigadzirwa. Huwandu hwezvigadzirwa uye matekinoroji akawana patent yenyika.
Professional R&D timu, isu tinopa imwechete-yekumira sevhisi kubva pachigadzirwa dhizaini, chakuumbwa dhizaini & kuvaka kune chigadzirwa kugadzira;
Isu takawana iyo ISO9001 yemhando system chitupa kubva kuSGS. Isu tiri vanokwanisa pamwe yemhando manejimendi system uye akaomesesa manejimendi timu. Isu tinoongorora uye tinoteedzera maitiro ese kubva kuPO kuiswa kune zvinhu kuendesa kune yega odhita kuburikidza neE ERP, MES, yemhando yekuchengetera manejimendi manejimendi system, uye ISO9001 mhando sisitimu; isu tinodzora mhando yega yega chigadzirwa uye tinopa inodhura-chigadzirwa uye sevhisi kune vedu vatengi pasirese.